About – Afထgy Platform
Halkaani waxaan kugu soo Koobayna sababaha shabakadda afoogy asaasitaankeeda ka dambaysay.
Aragtideenu wa isku xirka aqoonta iyo ardada raadinaya aqoontaas meel walba ay kala joogaan. Si arrintaas ay u suurta gasho Afoogy waxay la shaqeenaysa dhamaan dhinacyada ku howlan waxbarashada. Waxbarashada ma aha in ahaato mid ku xiran waqti iyo sido kale goobta u qofku joogu. Waxa inaga go’an in in aynu hormuud ka noqono in ardadu meel walba ay joogaan ay bartaan aqoonta ay doonayaan xilliga ay rabaan, Waana taas sababta lo aasaasay bartan waxbarasho 1441 oo ku beegan 2019. Aragtideenu wa isku xirka aqoonta iyo ardada raadinaya aqoontaas meel walba ay kala joogaan. Si arrintaas ay u suurta gasho Afoogy waxay la shaqeenaysa dhamaan dhinacyada ku howlan waxbarashada.
Qof walba wuxuu xaq u leeyahay inuu helo waxbarasho. Sido kale waxbarashada ma aha in ay ahaato mid ku xiran waqti iyo sido kale goobta u qofka joogo. Waxa inaga go’an in aynu hormuud ka noqono in ardada meel walba ay joogaan ay bartaan aqoonta ay doonayaan iyo sido kale xilliga ay rabaan. Waana tan sababta inagu dhalisay loona aasaasay bartan waxbarasho 1441 oo ku beegan 2019.
WAXA INA SOOCAYA
Waxaynu la jaan qaadeena kana faa’idaysaneena horumarka tiknoloojiyadda ay ku talaabsanayso. Waxaana inaga go’an in aynu waxbarashada ku so biirino wadooyin cusub oo lo so gudbin karo aqoonta. Bartan waxay u furantahay cid walba oo doonaysa in ay aqoon kororsato iyo sido kale cid walba oo doonayso in ay qoon so gudbiso.
Marka laga so tago himiladeena ugu wayn ee ah aqoon gudbinta, waxaynu sido kale isku howli doona shaqo abuuris lo sameeyo aqoonyahanada. Fadlan halkan kala soco wixi fursado shaqo ah ee so kordha.